လခြမ်း Banda-လိုင်းတင်ဒါရလဒ်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုတင်ဒါရလဒ်များ၏ Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်အတွက် Hilal
Hilal Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 70 + 355 Nifu ၏တံတားထိုအမိုင်အကွာအဝေးမှာတွေ့ရှိ: 73 + 315စီးပွားရေးလေလံရလဒ်များ၏သက်ဆိုင်ရာလိုင်း Facility တည်ထောင်အတွက်လျှပ်စစ်မီးများအားဖြည့်ကွန်ကရစ်သက်တမ်းတိုး၏စဉ်းစားရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပြီးနောက်၏ Gediz တံတား၌တွေ့
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 307944 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.280.951,68 TL နှင့်ကုန်ကျစရိတ်မိုင်အကွာအဝေးနှုန်း 1.610.686,16 နှင့်အတူလခြမ်း-သို့ကျဆင်းလာလိုင်းခဲ့: 70 + 355 '' Dee Nifu ၏တံတားထိုအမိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ရှိခဲ့: 73 + 315'' သမင်တွေ့ Gediz တံတားဟာစဉ်းစားရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းလေလံနှင့်£4ဆင်ဟွာ CEM TEXT ရရှိခဲ့လေလံဆွဲမရနောက်ဆုံးရလာဒ်များအရသိရသည်စာချုပ်ချီးမြှင့်တော်မူကြောင်းကို 1.355.161,00 ကုမ္ပဏီမှစီးပွားရေးနူးညံ့ထူထောင်ပြီးနောက်သက်တမ်းတိုးအတွက်သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအတွက်ကွန်ကရစ်လြှပျစစျမီးအဆောက်အဦအားဖြည့်။
TCDD Bandirma - Balikesir - Manisa - Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများနှင့်စက်ရုံတည်ထောင်နူးညံ့ 1, 2, အ5။ ။ ။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြု 13 / 02 / 2013 Bandirma ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု - Balikesir - Manisa - နု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှ Cut Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 1 ။ ,2။ နှင့်5တင်ဒါ။ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်အလုပ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ 1 နူးညံ့။ 22.097.676,2အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပေါင်။ Emre Ray စွမ်းအင်ဖက်စပ်, 19.336.827 - အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ5ပေါင်လေလံအတူ Sahin Yilmaz စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန။ ဗဟိုအခိုငျအမာကိုအနိုင်ပေး၏အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ 24.930.442 ပေါင်လေလံနှင့်အတူအဆောက်အဦ။ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ၏အစောပိုင်း Ayko 1 လူသိများအဖြစ်။ ,2။ ,5။ စိတျအပိုငျးအဘို့နှင့် ...
TCDD Bandirma - Balikesir - Manisa - Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများနှင့်စက်ရုံတည်ထောင်နူးညံ့ 1, 2, အ5။ ။ ။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြု 18 / 02 / 2013 Bandirma ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု - Balikesir - Manisa - နု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှ Cut Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 1 ။ ,2။ နှင့်5တင်ဒါ။ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်အလုပ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ 1 နူးညံ့။ 22.097.676,2အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပေါင်။ Emre Ray စွမ်းအင်ဖက်စပ်, 19.336.827 - အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ5ပေါင်လေလံအတူ Sahin Yilmaz စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန။ ဗဟိုအခိုငျအမာကိုအနိုင်ပေး၏အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ 24.930.442 ပေါင်လေလံနှင့်အတူအဆောက်အဦ။ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ၏အစောပိုင်း Ayko 1 လူသိများအဖြစ်။ ,2။ ,5။ စိတျအပိုငျးအဘို့နှင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ် Hilal-Banda-လိုင်းYaptırılacaktır 07 / 06 / 2018 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက် Hilal-Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Crescent-BANDIRMA လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: ကိုလည်း Gediz တံတား 70 အမှတ်များ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအတွက်အလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တည်ထောင်တွေ့ရှိခဲ့: 355 + 73 '' 315 + 4734 လည်း Nifu တံတားနှင့်မိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ '' အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 သည်နှင့်အညီအပိုဒ်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 283036 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်အရေအတွက်က ...
Bandirma - Balikesir - Manisa - Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းတင်ဒါအပင်: 19 / 09 / 2011 အဆိုပြုချက်စက်တင်ဘာလ 13 2011 အပေါ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် 1 ။ အဘို့ကို၎င်း, £ 32.981.510,2။ အဘို့ကို၎င်း, £ 28.510.880,3။ အဘို့ကို၎င်း, £ 31.433.360,4။ အဘို့ကို၎င်း, 33.762.804 နှင့်5£။ အဘို့ကို၎င်း, 33.086.100 နှုန်းအတိုင်းတင်ဒါတွင်ပါဝင်ကြောင်းကုမ္ပဏီများ: 1 ။ Anel2။ Alstom Grid,3။ Aykon လျှပ်စစ်4။ Dalkıranသူကို Co. ,5။ အီး + M,6။ Gülermak Co. ,7။ Savronik အီလက်ထရောနစ်, 8 ။ Siemens,9။ Sahin Yilmaz - Emre Ray, 10 ။ ultra နည်းပညာ - နာဆာအဆောက်အအုံ, 11 ။ အဆောက်အဦး Center ကစီမံကိန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Hilal-Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: Gediz တံတားYaptırılacaktırအတွက် 73 315 + 24 / 08 / 2017 Hilal-Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 73 ၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက် 3153+ Gediz တံတား။ REGION အစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး Hilal-Banda-လိုင်းကီလိုမီတာ: 73 အတွက် 315 + အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ကွန်ကရစ်သက်တမ်းတိုးအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 ယူပြီး, Gediz တံတားအားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 419985 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) ကိုအင်တာနက်လိပ်စာနုစာရွက်စာတမ်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ...
TCDD3။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧရိယာ Hilal-Banda-ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုစုဆောင်းခဲ့ကြ 11 / 04 / 2013 TCDD3။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧရိယာ Hilal-Banda-ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)3စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု, "Hilal - Bandirma လိုင်း Menemen - ဝင်ငွေခွန်၏ Manisa လက်ဝါးကပ်တိုင်3စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Hale က Dial - စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ" ဟုအဆိုပါတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧပြီလ 02 2013 ရက်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့သောလေလံနဲ့လေလံပါဝင်ပေါင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်ပြီး 502.625,32 ကုန်ကျစရိတ် (¨) စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်: ငါ www.yatirimlar.co ပိုပြီးသတင်းကို click ပေးပါ
TCDD3။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧရိယာ Hilal-Banda-ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုစုဆောင်းခဲ့ကြ 15 / 04 / 2013 TCDD3။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧရိယာ Hilal-Banda-ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)3စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု, "Hilal - Bandirma လိုင်း Menemen - ဝင်ငွေခွန်၏ Manisa လက်ဝါးကပ်တိုင်3စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Hale က Dial - စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ" ဟုအဆိုပါတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧပြီလ 02 2013 ရက်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 502.625,32: နုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အောက်ပါအတိုင်း 1 ပေါင်နှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလေလံ (¨) အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ EDK စီမံကိန်းကို 273.8892။ mega အင်ဂျင်နီယာ 543.5903။ KMG စီမံကိန်း 543.1554။ Pro ကို-Build စီမံကိန်း Ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 499.603 1122 / 11 2012 မတ်လ (EA) အရင်းမြစ်: ငါ www.yatirimlar.co ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇူလိုင်လ 26 1926 အမွှာ Beynelmilel
TCDD Bandirma - Balikesir - Manisa - Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများနှင့်စက်ရုံတည်ထောင်နူးညံ့ 1, 2, အ5။ ။ ။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ် Hilal-Banda-လိုင်းYaptırılacaktır
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (373) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)